zimbabwe Archives - Page 5 of 5 - Gambeta News
ZIMBABWE SOLAR FARM RECEIVES US$52m GUARANTEE
Gwanda solar farm, Zimbabwe receives US$52m guarantee.
Part of Zimbabwe national strategic power projects, Gwanda solar farm have received a US$52m guarantee from CHiNT Electric. The Chinese electrical engineering group is ready to provide a guarantee covering 30% of the Engineering, Procurement and Construction (EPC) aspect of the 100MW solar …
Posted in NEWS	Tagged Africa, Gwanda, Power, Solar farm, zimbabwe	Leave a comment
Zimbabwe is a country rich in natural views and fascinating landscapes
The name “Zimbabwe” is derived from two words of Shona language ‘dzimba’ (menaing ‘houses’) and ‘mabwe’ (meaning ‘stones’) and can be translated into English as ‘Big houses of stones’ or ‘honorable houses’. Zimbabwe is set in south-central Africa, between …
Posted in ADVENTURE & FUN	Tagged fascinating landscape in africa, honorable houses, lake kariba, largest water falls, victoria falls, zimbabwe	Leave a comment
ZIMBABWE’S REDCLIFF TOWN TO CONSTRUCT WATER TREATMENT PLANT
Posted on January 10, 2018 by Gambeta News
Redcliff Mayor submit a proposal to the Minister of State for Midlands Affairs for a proposed water treatment plant construction.
The project which will help solve the perennial water woes in the community and it will also help Redcliff resort to rationing water and restricting residents to only two days …
Posted in NEWS	Tagged CONSTRUCTION, REDCLIFF TOWN, WATER TREATMENT PLANT, zimbabwe	Leave a comment
Posted on December 15, 2017 by Gambeta News
Rehabilitated Railway commissioned in Zimbabwe that will help individuals with low income transport their bulk goods around the country.
The railway line which is a joint venture partnership between the government of Zimbabwe and the European Union is worth US $10m and is 35km-long. The rehabilitated Nandi-Mkwasine railway line in …
Posted in NEWS	Tagged NRZ, Railway, REHABILITATED, zimbabwe	Leave a comment
The project is funded through fiscal resources …
Posted in NEWS	Tagged CONSTRUCTION, INFRASTRUCTURE, PROJECTS, zimbabwe	Leave a comment
ZIMBABWE: HARARE CITY COUNCIL GETS US$ 26M FOR ROAD REHABILITATION
Funds released to Harare city council for road rehabilitation after President Mugabe declared a state of disaster on Harare’s roads and road infrastructure.
Zimbabwe’s Government Emergency Rehabilitation Fund has approved US$26m to Harare city council to ensure that roads are repaired before the onset of the rainy season.
Posted in NEWS	Tagged HARARE CITY COUNCIL, ROAD REHABILITATION, zimbabwe	Leave a comment
Posted in NEWS	Tagged Africa, Power Projects, zimbabwe	Leave a comment
Zimbabwe power demand to increase from 1500MW to 2200MW after the Kariba south project is completed in 2018
The project which was initiated by the Zimbabwe power company (ZPC) will improve the country power shortage. The project which is expected to inject two 150 MW units at Kariba South Power …
Posted in NEWS	Tagged HATCH, HYDRO-POWER, KARIBA SOUTH PROJECT, zimbabwe, ZPC	Leave a comment
ZIMBABWE’S BIGGEST AIRPORT TO BE RENAMED AFTER PRESIDENT MUGABE
Posted on September 20, 2017 March 6, 2018 by Gambeta News
Zimbabwe’s Harare International Airport is set to be renamed after the southern African country’s long-time president Robert Mugabe, a report say.
A memo issued in early September by the Civil …
Posted in EDUCATIVE MATERIALS	Tagged airport, harare, harare international airport, mugabe, zimbabwe	Leave a comment